အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kimorasem - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Htay Lane !
၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၉
၄ မေ ၂၀၂၀
၅ ဖိုင်:Khongso.jpeg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ
၆ ယောင်ဝရွာ( Youngwa Village)
၇ မီးချောင်းမြစ် (Michaung River)အတွက်စာမျက်တင်ချင်တယ်ကူညီပေးပါဆရာ။
၈ ယိုလိန်း အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Htay Lane ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၆:၂၀၊ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
ေက်းဇူး ပါ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၁၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
The sub-tribes of Khongso Chin in Myanmar. 1. Htay 2. Kabu 3. P' Ngan 4. Yo 5. Rahnam 6. Tahim Za 7. Kwar 8.Santhar 9.kraw Htu 10. Kamu 11.Nam luek Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၀၄:၀၉၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ကတော့ Ninjastrikers ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သင့်ရဲ့ တည်းဖြတ်မှုတစ်ခုဟာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက် ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ တည်းဖြတ်မှုကို လေ့ကျင့်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ sandbox မှာ ပြုလုပ်ပေးပါ။ အမှားပြုလုပ်မိတယ်လို့ သင်ထင်ပါက၊ ဒါမှမဟုတ် မေးစရာတွေ ရှိနေခဲ့ရင် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ စာလွှာချန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၄၄၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
Hkongso ကို khongso ဟုပြောင်းပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ခေါင်စိုသူတို့ကိုသူတို့ ခေါင်မီKhongmiဟုခေါ်ကြသည်။ကျေးဇူးပါ။ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၂၂:၃၆၊ ၁၁ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ဝီကီပီးဒီးယားတွင် အပြုသဘောမဆောင်သော တည်းဖြတ်မှုမျိုးကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင့်တည်းဖြတ်မှုများဟာ လက်သရမ်းခြင်းတွင် ပါဝင်နေတဲ့အတွက် နောက်ပြန်ပြင်လိုက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်တည်းဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ sandbox ကို အသုံးပြုပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲ လက်သရမ်းခြင်းကြောင့် တည်းဖြတ်မှု အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၃၁၊ ၁၁ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ကျေးဇူးပါ။ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၀၁:၁၀၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ဖိုင်:Khongso.jpeg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖိုင်:Khongso.jpeg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၄၈၊ ၁၃ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ကျေးဇူးပါ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၁၂:၃၀၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ယောင်ဝရွာ( Youngwa Village)[ပြင်ဆင်ရန်]
ယောင်ဝရွာသည်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်၊ပလက်ဝမြို့နယ်၊တိုင်ဝအုပ်စုတွင်တည်ရှိပါသည်။ယောင်ဝရွာတွင်အိမ်ခြေ​ပေါင်း(၅၀၀)ကျော်ရှိပါသည်။ ယောင်ဝရွာတွင်ခေါင်စို၊ခူမီး၊အာနူး၊ခေါင်တူး၊မာရာနှင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြသည်။ ယောင်ဝရွာမှမတူပီမြို့ကိုကုန်းလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထား၍ဆမီးမြို့ကိုရေလမ်း၊ကုန်းလမ်းဖြင့်၎င်း၊ကျောက်တော်မြို့ကိုရေလမ်း၊ကုန်းလမ်းဖြင့်၎င်း၊ပလက်ဝမြို့ကိုရေလမ်း၊ကုန်းလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ ၂၀၁၂တွင်ဦးစိုးထက်မှဂြိုလ်တုဖုန်းလိုင်းတပ်ဆင်ထား​၍ယခုတွင်အလွယ်တကူဆက်သွယ်ပြုနိုင်ပါသည်။ ယောင်ဝရွာမှာငရုတ်၊ချင်းစိမ်း၊နှမ်း၊စပါး၊ဝဥ၊ ငှတ်ပျော်သီး၊ သရက်သီး၊နှနွမ်းစသောစားကုန်များထွက်ဆမီးမြို့၊ပလက်ဝမြို့နှင့်ကျောက်တော်မြို့သို့တင်သွင်းရောင်းချပါသည်။နွား၊ဝက်၊ကြက်၊ဆိတ်များကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊မနီပူရ်မြို့သို့တင်သွင်းရောင်းချပါသည်။ ပညာရေး ယောင်ဝရွာ၏အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကို၁၉၉၈-၁၉၉၉ခုနစ်၊ မူလွန်ကျောင်းကို ၂၀၀၆ခုနစ်၊အလယ်ခွဲကို၂၀၁၃ခုနစ်၊ အလယ်တန်းကို၂၀၁၇၊ အထက်တန်းခွဲကို၂၀၁၉ခုနစ်တွင်တရားဝင်ရရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင်ကျောင်းသား/သူ ပေါင်း၃၀၀ ကျော်ရှိပါသည်။
ကိုးကား ၁။တိုင်ဝအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏မှတ်တမ်း(၂၀၁၉)။ ၂။ ဦးတိန်ယာ ၊ဒေါ်ကာထွန်းတို့၏နှစ်(၅၀)ပြည့်မင်္ဂလာဆောင်မှတ်တမ်း။ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၀၀:၃၈၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
မီးချောင်းမြစ် (Michaung River)အတွက်စာမျက်တင်ချင်တယ်ကူညီပေးပါဆရာ။[ပြင်ဆင်ရန်]
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊မနီပူရ်မြို့နယ်မှစီးဆင်းသည့်မီးချောင်းရေသည်စင်လီရွာ၊ဗဟန်ဝရွာ၊ ယောင်ဝရွာမှစီးဆင်း၍ဆမီးမြို့မှရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်ပွီပုန်းရွာထိကုလားတန်မြစ်ထဲစီးဆင်းနေပါသည်။ ထိုမီးချေင်းရေသသည်ဒေသခံလူမျိုးနွယ်စုဖြစ်သောခေါင်စို၊လိခခ်၊ မတူ၊မာရာ၊ခူမီးနှင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏အသက်သွေးကြောပင်ဖြစ်သည်။ ထိုမီးခေါင်းမြစ်ဖြင့်ယောင်ဝရွာမှစင်လီရွာအထိ၊ ယောင်ဝရွမှဆမီးမြို့၊ပလက်ဝမြို့၊ ကျောက်တော်မြို့များတွင်ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ ထိုမီးချောင်းမြစ်ရေကိုခေါင်စိုစကားဖြင့်( ရိရ်အိုခ်) ဟုခေါ်ကြသည်။ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၀၃:၁၀၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ယိုလိန်း အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ယိုလိန်း စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း A7 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ချင်း၊ အဖွဲ့အစည်း (တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ ကလပ်၊ ကုမ္ပဏီ စသည်)၊ ဝက်ဘ်အကြောင်းအရာ၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းအရာသည် ထင်ရှားကျော်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် အရေးပါခြင်းကို လက်ခံနိုင်လောက်အောင် ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဤသို့သော ဆောင်းပါးများသည် အချိန်မရွေး ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်အချက်များအား ထင်ရှားအရေးပါမှုအဖြစ် လက်ခံသည်ဆိုခြင်းအား ဖတ်ရှုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၆:၃၄၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၀ (UTC)
ဖျက်လိုက်တယ်ဆရာ ထယ်နွယ်စု ၀၇:၀၃၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၀ (UTC) — Htay Lane (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 07:03, 15 May 2020
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Kimorasem&oldid=516038" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။